GoldCoin စျေး - အွန်လိုင်း GLD ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို GoldCoin (GLD)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ GoldCoin (GLD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ GoldCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $2 286 074.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ GoldCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
GoldCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GoldCoinGLD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0234GoldCoinGLD သို့ ယူရိုEUR€0.0198GoldCoinGLD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.018GoldCoinGLD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0213GoldCoinGLD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.208GoldCoinGLD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.148GoldCoinGLD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.519GoldCoinGLD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0873GoldCoinGLD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.031GoldCoinGLD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0328GoldCoinGLD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.52GoldCoinGLD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.182GoldCoinGLD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.126GoldCoinGLD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.75GoldCoinGLD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.96GoldCoinGLD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0322GoldCoinGLD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0359GoldCoinGLD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.728GoldCoinGLD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.163GoldCoinGLD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.51GoldCoinGLD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩27.8GoldCoinGLD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦9.08GoldCoinGLD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.71GoldCoinGLD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.644
GoldCoinGLD သို့ BitcoinBTC0.000002 GoldCoinGLD သို့ EthereumETH0.00006 GoldCoinGLD သို့ LitecoinLTC0.000431 GoldCoinGLD သို့ DigitalCashDASH0.000258 GoldCoinGLD သို့ MoneroXMR0.000263 GoldCoinGLD သို့ NxtNXT1.83 GoldCoinGLD သို့ Ethereum ClassicETC0.00346 GoldCoinGLD သို့ DogecoinDOGE6.77 GoldCoinGLD သို့ ZCashZEC0.000285 GoldCoinGLD သို့ BitsharesBTS0.722 GoldCoinGLD သို့ DigiByteDGB0.75 GoldCoinGLD သို့ RippleXRP0.0833 GoldCoinGLD သို့ BitcoinDarkBTCD0.000808 GoldCoinGLD သို့ PeerCoinPPC0.0778 GoldCoinGLD သို့ CraigsCoinCRAIG10.68 GoldCoinGLD သို့ BitstakeXBS1 GoldCoinGLD သို့ PayCoinXPY0.409 GoldCoinGLD သို့ ProsperCoinPRC2.94 GoldCoinGLD သို့ YbCoinYBC0.00001 GoldCoinGLD သို့ DarkKushDANK7.53 GoldCoinGLD သို့ GiveCoinGIVE50.79 GoldCoinGLD သို့ KoboCoinKOBO5.34 GoldCoinGLD သို့ DarkTokenDT0.0216 GoldCoinGLD သို့ CETUS CoinCETI67.73
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 05:50:02 +0000.